Safrida In Europe On Talooyin Miisaaniyadda A | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Safrida In Europe On Talooyin Miisaaniyadda A
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 10/04/2021)
Safraya Europe on miisaaniyad waa caqabad! Si kastaba ha ahaatee, waxaa macquul ah inta aad sameeyo cilmi-baaris si loo kuu diyaarin safarka si caqli ah. Waxaa aad la yaab yaabaa in inta aad ku badbaadin karto by qaadashada hab saxda ah ee gaadiidka ama dooranaya dalal ka jaban. noogu aamini; waxaa jira xal kale miisaaniyadda-friendly for wax walba oo ay weheliyaan safarkaaga - ka soo jiidashada in gaadiid cuntada si ay u fududeyn.
Xusuusnow, safra on miisaaniyad ma aha "saboolka ah:"Ay tahay bixio! Sidaas ka hor inta aadan sii dareen ka xumahay naftaada, ka fikir dhammaan lacagtii idinka badbaadin doonaa, halka weli samaynta Xusuus cajiib ah. Your miisaaniyadda waa xadidan oo qaali ah; Sidaa darteed, waa in aad u maareeyaan daryeelka. Halkan waxaa ku qoran talooyin our sare ee u socdaalaya ee Yurub on miisaaniyad:
Dhagra Your Route
Dhis aad faahfaahin ka hor inta wax kale. shaki kuma jiro, aad heysato liiska waa-booqo dalal Yurub. xaqiiqda, aad kulligood ma booqan kartaa marka aad safarka ee Yurub on miisaaniyad, gaar ahaan haddii waqtiga aad waa sida ku koobnayn sida miisaaniyada. Sidaas halkii riixaya in ay iyaga oo dhan ka eeg, soo qaado aad top laba ama saddex. Haddaba hubi map-ka si aad u aragto haddii magaalooyinka aad tahay fiirsaneysa Way fududahay in ay ku xidhmaan, iyo waxa magaalooyin kale waa waddada in.
Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in aad xiisayso booqanaya Paris iyo Amsterdam. Hubi wadada, oo aad arki doonaa in Brussels waa magaalo ku taala dhexeeya labada! by dooranaya magaalooyinka in ay ku xirmaan, ama kuwa laba u dhexeeya meelaha lagu riyoodo, waxaad ka heli kartaa bang dheeraad ah oo aad muddaba.
Waxaad ka heli heerka ugu fiican marka aad u leenahay aad hotel ama qolalka hostel ka hor. The hore, fiican. Dooro waafajin aad si caqli ah.
Iyadoo shidmaan ee hotels 5-star macnaheedu dhamaystiran raaxada iyo raaxada, iyagu ma ay tahay doorashada smart marka la miisaaniyad dhagan qabashada. Intaas waxaa sii dheer, jooga ah qolka hotel qaali noqon lahaa qashinka ah oo aad lacag, inta badan haddii aad faahfaahin ku lug meelaha iyo sahaminta magaalada. Waxaa loola jeedaa in aad doonaa oo kaliya la isticmaalayo qolka si shil oo soo baxay oo ku saabsan inta badan maku maalmood aad.
Haddii aad rabto inaad kaydiso, laga yaabaa in aad la maxaliga ah free joogo adigoo booqanaya is dhaafsi hoteelada. degaano kale oo raqiis ah waxaa ka mid ah hostels in xarumaha dalab kuleejo-style. Kiraynta Room on suuqa online sida Airbnb ayaa sidoo kale ugu fiican ee ku safraya Europe on miisaaniyad.
Cun Like Local marka safraya Europe on miisaaniyad
farxaan Gastronomic waa meel walba ee Europe. Laakiin haddii aad ku safraya Europe on miisaaniyad, waxa caqliga leh ee la sameeyo ayaa ah in laga fogaado wax ka cunidda goobaha qaaliga ah ee dalxiiska. Ha u ogolaan biilasha makhaayad jebin miisaaniyadda cuntada.
halkii, cunin sida maxalliga ah a iyo hesho dhaqanka dhab ah waayo-aragnimo. oo xero Cuntada iyo cuntada wadada waa magaalo Yurub oo dhan, oo ay tahay ay goobaha kaamil ah si ay u iibsadaan cunnada dhab ah. Iyo qayb ka mid ah ugu wanaagsan waa in ay ku kici doona oo kaliya a euros yar. Haddii aad rabto in aad si loo badbaadiyo on cuntada, ka dhacay dukaanka raashinka. Haddii aad ku jirtid tahay qol in uu leeyahay ay tahay in la kariyo, iibsadaan waxyaabaha for saxan aad si fudud u samayn kartaa.
Seexda tareenka ee
Hurdada on tareenka u dhaxeeya meelaha laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah talooyin aannu u jecel dadka u safraya Yurub on miisaaniyad. Halkii lumin saacadaha maalintii oo qiimo leh in transit, dooran in ay tagaan on tareen habeen. Waxaa aad la yaab yaabaa in sida badan ka jaban waa ka badan tayaasha hotel a Habeen. Hubaal, aad ka maqnaan doonaa ugu muuqaal, laakiin aad hurdada ka kacaysid si fiican u nastay magaalo cusub!
Ready to start traveling in Europe on a budget and ballansan tareen? tigidhada tareenka Book hore iyo hesho heshiisyo ugu wanaagsan on kursi!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-europe-budget%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#miisaaniyadda #traveleurope miisaaniyad cheaptravel keymoney